Sawir-qaadashada oo loo marayo saddex rinjiyeyaasha saliida xasaasiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Saddex Rinjiyeyaal Sawireed Cajiib ah
Aniga oo u kuur galaya sawir-qaadista, oo laga soo dhex qaaday shabakadaha shabakadaha shaqada Reisha Perlmutter, oo ah farshaxan cusub oo nafsaddeeda isku biimeysa biyo sida sawiradeeda, ka dibna sii maraya Jeannie Maddox, ugu dambayntii waxaan ku dhammaaday wajiga saddex rinji oo cajiib ah taasi waxay tusaale fiican u noqon kartaa in la raaco bilowgaas isku dayaya inuu maamulo sifadan rinjiyeynta ah.
Saddexda waa Chuck Close, Tjalf Sparnaay iyo Ran Ortner waxaanan hoos ku wadaagi doonaa shaqooyinkiisii ​​ugu muhiimsanaa oo naxdin leh. Saddex rinjiyeyaal oo waqtigooda ku qaatay muujinta farshaxanimadooda noocyadan laga soo bilaabo 60-meeyadii ilaa maanta oo iyagu muujiya faahfaahin aad u sarraysa oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah shaqadooda.
Uno oo ka mid ah rinjiyeyaasha sawir qaadista ee ugu caansan adduunka farshaxanka wanaagsan oo ilaa maanta la sawirayay, xitaa markii 1988 dii uu hemiplegia xaq u xaddiday awoodiisa inuu u sawiro si taxaddar leh sidii hore.
Xaqiiqda aan sidoo kale wajaheyno a sawir qaade weyn waxa kale oo ay ka caawisay inuu allifo sawiradaas tayada weyn leh. Waxaana laga yaabaa inaad haysato ikhtiyaarka aad ku arki karto qaar ka mid ah shaqadiisa bandhig.
Farshaxan ayaa loo aqoonsaday farsamadiisa weyn ee rinjiyeynta wajiga aadanaha iyo halabuurkeeda waaweyn.
Farshaxanistaha reer Holland, sawirqaade, sawir qaade iyo rinjiye, halabuurkiisa ayaa sidoo kale xusid mudan qaabkiisuna waa mid weyn isku dhafka u dhexeeya hyperrealism iyo qaababka kala duwan ee rinjiyeynta.
La qaabka ay muraayaddu u muuqato iyo dhalanrogyaasheeda ayaa ku guuleysan doonta saameynta aan ku wajaheyno rinjiyeyn ka xeel dheer xitaa sawirrada qaarkood. Isaga laftiisa ayaa ugu yeeray fankiisa mega-realism.
Tusaale kale oo weyn oo noocan ah kaas oo rinjiyeyn ah ku saleysan sawir waxaana loo arkaa a kala duwanaanta 'hyperrealism'.
Rinjileeye u ciyaara inuu u janjeero dhanka sawir-qaadista iyo waxa ka sii dheereyn kara Surrealism. Waxay leedahay a meher weyn si loo muujiyo iftiinka iyo biyaha qaar ka mid ah marinnadeeda si fudud ayaa u qurux badan.
Dhaqdhaqaaqa biyaha, saameynteeda iyo sida ay u falceliso waxay qaadatay sannado daraasado ah si aan awood ugu yeelanno inaan iska horkeenno shaqooyinka sawirro tayo sare leh oo heerar kasta leh.
Fikradiisu waxay tahay in daawaduhu kahelayo shaqadiisa sida uu biyaha u arko iyo dhaqdhaqaaqeeda oo dhan markay badda ku jirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Saddex Rinjiyeyaal Sawireed Cajiib ah
Naxariis darrada iyo dhibaatada ka jirta sawir gacmeedka saliida ee loo yaqaan 'Sparrow'
Boorarka cusub ee kooxda ismiidaaminta ee "muuqaal" kale siiya Joker, Harley Quinn iyo inbadan